I-Lifi, i-inthanethi ngokukhanya izikhathi eziyi-10 ngokushesha kune-WiFi ne-4 G - AFRIKHEPRI
I-Lifi, i-intanethi ngokukhanya izikhathi eziyi-10 ngokushesha kune-Wifi ne-4 G
Umprofethi - Khalil Gibran (Audio)
ULwesithathu, Julayi 15, 2020
I-Lifi, i-intanethi ngokukhanya
NgeLifi, ukuphela kwamagagasi omsakazo ayingozi. Ubuchwepheshe be-Lifi buyindlela entsha yokuhambisa idatha yedijithali isebenzisa ukukhanya.
MWC 2013: Lifi, i-inthanethi ngokusebenzisa ukukhanya 10… by CNETFrance
Kalula nje, lobu buchwepheshe buguqula isiginali kanambambili, ukulandelana okungu-0 no-1, kube ama-walrus akhanyayo. Ama-LED azophuma akhanyise, kepha ngejubane angabonakali ngeso lenyama. Ngezigidigidi eziguquguqukayo ngomzuzwana, inani ledatha elishintshwa nguLifi lalingafinyelela ku-100Mbit / s ngokusho kukaSuat Topsu, uprofesa eYunivesithi yaseVersailles.
U-Suat Topsu, i-CEO ye-OLEDCOMM, usebenze kusukela ku-2007 kulobu buchwepheshe. Lesi siqalo sesiFulentshi singokuqala futhi esisodwa sokusebenza eFrance ku-Lifi.
Abanye abalingisi baseJapane futhi kamuva nje e-United States. U-OLEDCOMM unikeza ngalokhu MWC 2013 prototype esebenza nge-100% nge-Lifi: uhlelo lokulalela, olulawulwa yi-smartphone futhi olomsindo wayo uthunyelwa isibani esikhanyayo edokisini lomsindo.
I-combo, i-capillotracted encane, ebonisa lobu buchwepheshe. Ukuxazulula inkinga ibanga, uplink ne-downlink, konke kuvezwe kuvidiyo.
Kepha kuSuat Topsu amathemba abaluleke kakhulu. Izicelo zokuqala zingafika ezindaweni lapho i-Wi-Fi ingavunyelwe khona: indiza noma izibhedlela ikakhulu. Ngakolunye uhlangothi, iLifi ithandwa ngakolunye uhlangothi oluhlaza: waqeda amagagasi ayingozi ekhanda eligcweleNgakolunye uhlangothi, asazi ukuthi kuzokwenzani abantu abanesithuthwane.
E-Kenya, owesifazane uphendukela epulasitiki abe yigolide